Home / बिचित्र संसार (page 4)	बिचित्र संसार	अल्छी हुनु बुद्धिमानीको निसानी
324 Views अमेरिकी अनुसन्धानकर्ताहरूले बडो अचम्मको कुरो पत्ता लगाएको दाबी गरेका छन् । त्यो के भने, अल्छी व्यक्ति सक्रिय रहनेहरूको दाँजोमा बढी बुद्घिमान् हुन सक्छन् रे । सर्तचाहिँ के छ भने, त्यस्ता अल्छी व्यक्तिहरू बढी समय चिन्तन गर्नेचाहिँ हुनुपर्छ ।
रुखले ठाउँ सरेको आरोपमा पक्राउ, १२० बर्षदेखी सजाय स्वरूप साङ्लाले बाँधियो
517 Views भाद्र २४, काठमाडौं । पाकिस्तानको पेशावरमा भएको एउटा रुखलाई चारैतिरबाट साङ्लोले बाँधेर राखिएको छ । झट्ट हेर्दा यस्तो लाग्छ विगतमा बेलायती उपनिवेशका क्रममा भोगेको दासत्वको प्रतीकका रुपमा- रुख त्यसरी बाँधेर राखिएको हो । तर यथार्थ भने निकै फरक छ । रुखको नजिकै पुगेपछि वास्तविकता बुझ्न गार्हो पर्दैन । किनभने रुखमा लेखिएको छ – म पक्राउ परेको छु ।
एक साँझ एकजना बेलायती अधिकारी रक्सिले मातेका थिए, उनले सोचे म आफ्नो पहिलेको ठाउँबाट सरेँ । त्यसैले उनले मलाई पक्राउ गर्न आदेश दिए । त्यहिबेलादेखि म बन्धक छु । सन् १८९८ तत्कालिन बेलायती अधिकारी जेम्स स्क्विडले आफू रक्सिले मातेको बेला रुखलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएका थिए ।
रसियाको नदी एक्कासी रातो भएपछि स्थानियवासी आश्चर्यचकित, मन्त्रालयले विज्ञप्ती नै निकाल्यो
1,129 Views २३ भदौ, एजेन्सी।
रसियाको नोरिलिक्स शहरस्थित डाल्डीकन नदीको पानी एक्कासी रातो भएपछि स्थानियवासी आश्चर्यचकित भएका छन । नदीको पानी पुरै रातो भएको फोटो अहिले सामाजिक सञ्जालहरुमा भाइरल भएको छ ।
स्थानिय अधिकारीहरुले नदीको पानी रातो भएको पुष्टी गरेपनि यसको कारण पत्ता लाउने प्रयास गरिरहेका छन ।
केहीले वातावरणमा आएको परिवर्तनले यस्तो हुन सक्ने अनुमान गरेका छन ।
यसैबीच रसियाको प्राकृतिक स्रोत एवं वातावरण मन्त्रालयले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै अनावस्यक हल्लामा नलाग्न सर्व साधारणलाई आह्वान गरेको छ । मन्त्रालयले नदी नजिकै रहेको मेटालर्जिकल प्लान्टको पाइप फुटेपछि त्यहाँबाट निस्केको रसायनका कारण नदीको पानी रातो देखिएको बताएको छ ।
नोरिलिक्स निकले प्लान्ट विश्व कै सबै भन्दा ठुलो निकेल उत्पादक कम्पनी हो । उता, कम्पनीले भने आफ्नो कारण घटना नभएको दाबी गरेको छ ।
स्थानिय पत्रिकाहरुले भने नदीको पानी रातो भएको यो पहिलो पटक नभएको बताएका छन । यद्यपी ती अखबारहरुले यस बारे विस्तृत विवरण दिएका छैनन।
यहाँका महिलाहरु विवाहपछि परपुरुषसँग राख्छन् सम्बन्ध
1,220 Views एजेन्सी । हाम्रो समाजमा महिलाहरुले एक भन्दा बढी पुरुषसँग यौनसम्बन्ध राख्नुलाई अपराध मानिन्छ ।
तर, अफ्रिकी देश नाइजेरियामा महिलाहरु विवाहपछि परपुरुषसँग बढी सम्बन्ध राख्ने गरेको तथ्या बाहिर आएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिका डेली मेलका अनुसार नाइजेरियाको तुआरेग क्षेत्रमा महिलाहरु तथा युवतीहरु पुरुषको बलात्कार पनी गर्छन् । जबरजस्ती पुरुषसँग सम्बन्ध राख्छन् । यहाँ सबै ठिक उल्टो छ । महिला स्वतन्त्र छन् । पुरुष पीडित छन् ।
तुआरेगका जनजाति युवतीहरु खुलेयाम घुम्छन् र केटाहरु घर हेर्छन् । यहाँका केटाहरु विहेपछि केटीको घरमा दुलहीजस्तै भित्रिन्छ ।
यहाँ पुरुषहरुले काम गर्नका लागि महिलालाई सोध्नुपर्छ । उनीहरुले हुन्छ भनेमात्रै गर्न पाउछ । युवतीहरु युवकसँग जबरजस्ती यौनसम्बन्ध राख्छन् । यहाँ विहेभन्दा पहिला पनी महिला जुनसुकै पुरुषसँग पनी यौनसम्पर्क गर्न सक्छन् ।
विहेपछि पनी महिलाहरु जुनसुकै परपुरुषसँग पनी खुलेयाम रुपमा यौनसम्बन्ध राख्छन् । यसमा उनीहरु स्वतन्त्र हुन्छन् । श्रीमानको हस्तक्षेप हुँदैन् ।
तुआरेगका जनजाति महिला कुनै पुरुषसँग पनी शारीरिक सम्बन्ध बनाउन सक्छन् र कुनै पनी बेला श्रीमानसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्छन् ।
यी हुन् माउसुलीको सुप खाने मान्छे
334 Views विदेशी टेलिभिजनमा देखिने विभिन्न एडभेन्चर शोहरुमा मानिसहरुले सर्प, किराफट्यांग्रा तथा छेपारो लगायतका जिवहरु खाएको देख्नुभएकैै होला ।
यस्ता टेलिभिजन कार्यक्रममा देखाइएजस्तै साँच्चै उनीहरुले ती चिज खान्छन् की खान्नन् त्यो दर्शकलाई थाहा हुने कुरा भएन । तर भारतमा भने एकजना यस्ता व्यक्ति छन् जो माउसुलीकोे सुप नखाइकन बस्नै सक्दैनन् ।
भारतको मध्यप्रदेशस्थित मैना गाउँमा बस्ने कैलाश नामका व्यक्ति माउसुली खाने कुराको शौखिन व्यक्ति हुन् । जसका कारण उनलाई मानिसहरुले विषपुरुषको नामले चिन्दछन् । पछिल्लो २० वर्षदेखि उनले माउसुली पकाएर सुप खाने गरेका छन् ।
यति मात्र कहाँ हो र उनले माउसुली उमालेको पानी नै दिनहुँ पिउँछन् । सुत्नुअघि यिनले तिनवटा माउसुलीको सुप पिउँछन् । माउसुलीको सुप नपिएसम्म आफुलाई निद्रा नै नलाग्ने उनी बताउँछन् ।
अहिलेसम्म आफुले विभिन्न ६० प्रकारका जिवजन्तुको स्वाद चाखिसकेको उनको भनाई छ । अचम्मको कुरा उनलाई सर्पको विषले पनि असर गर्दैन ।
गाउँमा कसैलाई सर्पले टोक्यो भने उनले उक्त मानिसको सरीरबाट सर्पको विष चुसेर मानिसको ज्यान बचाइदिन्छन् ।
दाजु र भाइको एकै श्रीमती : पेमा घरमा दाजु श्रीमतीसँग हुँदा भाइ गोठमा, भाइ घरमा हुँदा दाइ गोठमा…
2,812 Views गोरखा । दाजु र भाइकी एकै श्रीमती। घरमा दाजु श्रीमतीसँग हुँदा भाइ गोठमा, भाइ घरमा हुँदा दाइ गोठमा। वर्षौं पहिले उत्तरी गोरखाको दुर्गम भेगमा एकैघरका दुई दाजुभाइका एउटै श्रीमती खुबै भेटिन्थे। तर हिजोआज पहिलेभन्दा कम भए पनि एउटै बिहे गर्ने परम्परा हटेको भने छैन।अहिले पनि बिही, छेकम्पार ,सामागाउँ लगायत गाविसका दुई भाइले एकै श्रीमती बिहे गरेको भेटिन्छ। ‘पहिले गाउँपिच्छे थुप्रै थिए, अहिले थोरै छन्, बिस्तारै एउटै बिहे गर्ने परम्परा हटे पनि पूर्ण रुपमा हटेको छैन,’ बिहीकी स्थानीय शिक्षिका लुना गुरुङले भनिन्।
बिही गाविसमै यस्ता गाउँ पनि छन् जहाँ एकै घरका दुई दाजुभाइले एउटै बिहे गर्छन्। बिही १, क्रोका एकै घरका दुई दाजुभाइले वडा नम्बर ९ की पेमा लामालाई बिहे गरे। फुर्बु तेन्जिङ र छेवाङ दुई दाजुभाइ हुन्। पेमा उनीहरु दुवैका श्रीमती हुन्।
बिहेवारी गर्ने परम्परा भने अन्यत्रभन्दा त्यहाँ बेग्लै छ। मन परेको केटीलाई मेलापात, गोठालो जाँदा, घट्ट जाँदा, बाटोमा भेटेका बेला र राति सुतेको ठाउँमै गएर तान्ने प्रचलन छ। पेमालाई पनि नुर्बु र छेवाङले सुतेका बेला घरबाटै तानेका थिए। केटीका आमाबाबुलाई खुसी बनाउन सके भने छोरीलाई जबरजस्ती तानेर, बोकेर दलबलसहित आएर लैजान प्रचलन छ। बिही गाविसमा अहिले पनि तानेर जबरजस्ती बिनामन्जुरी बिहे हुने क्रम रोकिएको छैन।
बिही ४ की सोनाम साङ्मोको १६ वर्षे उमेरमा तानेरै बिहे भएको थियो। ‘घरमा आमाबुवालाई टन्न रक्सी खुवाए,’ उनले सुनाइन्, ‘मलाई तानेर लगे, फर्कियो भने घरमा पनि नराम्रो, आमाबाबुलाई केटा पक्षले कुटपिट गर्ने, झगडा हुने, पैसा दिनुपर्ने सम्म हुन्छ, डरले म बसिरहेँ।’ उनको अहिले तीन छोरी र दुई छोरा छन्। ‘म त एउटा मात्रै श्रीमती, अझै गाउँमा कोही केटी त दुईजना भएको ठाउँमा पर्छन्,’ साङ्मोले भनिन्। उत्तरी गोरखाका अधिकांश दुर्गम गाविसमा तानेरै बिहे गर्ने, एकै परिवारका दुई दाजुभाइले एउटै केटीसँग बिहे गर्ने प्रचलन अहिले पनि छ। दाजुभाइले बिहे गरेपछि आलोपालो घरमा बस्ने गर्छन्।
‘बिहीमा मात्र होइन, छेकम्पार, सामागाउँमा दुई दाजुभाइको एउटै बूढी अहिले पनि छन्,’ स्थानीय शिक्षिका लुना गुरुङले भनिन्, ‘पहिले धेरै थियो तर अहिले बिस्तारै हराउँदै गएको छ।’ तानेर बिहे गर्ने प्रवृत्ति भने बढिरहेको उनी बताउँछिन्। तानेर बिहे गर्नुलाई संस्कारसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। उनले भनिन्, ‘केटीको घरपरिवार नमान्दासम्म यो सम्भव हुँदैन, तर मानिहाल्छन्।’ कमजोर चेतना स्तर र संस्कारका कारण यो परम्परा तोडिन गाह्रो भएको उनले बताइन्।
गाउँमा केटा नभेट्दा हुँदैन बिहे
बिही ६, न्याककी कान्छी गुरुङ २९ वर्ष पुगिन्। न घरमा बिहे गर्ने कुरा गर्छन् न कसैले उनलाई बिहे गरौं भन्ने प्रस्ताव राख्छ। अहिलेसम्म उनको लगन जुरेको छैन। ‘गाउँमा केटा छैनन्, म मात्र होइन हाम्रो गाउँमा थुप्रै केटीको बिहे भएको छैन, कतिको बिहे नभएरै कपाल फुलिसक्यो,’ गुरुङले भनिन्।
उत्तरी गोरखाको बिही ६, न्याकमा रहेको करिब ४५ धुरीघरको एकै गाउँमा घरेपिच्छेजस्तो बिहे गर्ने उमेरका तर नभएका युवती छन्। बिहे गर्ने उमेरका युवती धेरै हुने, युवक पढाइ, रोजगारीको सिलसिलामा गाउँ छाडेर जाने भएपछि गाउँका युवतीको बिहे नभएको स्थानीय बताउँछन्। ‘मैले एक कक्षा पनि पढिनँ, घरमा घाँसदाउरा गरेर बसेँ, केही नजान्ने मलाई कसले पो बिहे गर्थ्यो?’ स्थानीय देवानी गुरुङले भनिन्। उनी अहिले ३५ वर्ष पुगिन् तर बिहे भएको छैन। ‘छिमेकमा एकै घरमा दुईतीन जनाको बिहे नभएको धेरै छन्, म त बूढी भएँ, भर्खरका बिहे गर्ने उमेरका पनि केटी धेरै बाँकी छन्।’
देवानी अहिले मनास्लु पदमार्गको बाटोछेउमा होटल गरेर बस्छिन्। अब उनलाई बिहे गरौं जस्तो पनि लाग्न छाडिसक्यो। ‘लगन जुरेन, कर्ममा नलेखेर होला नि,’ उनले भनिन्, ‘बिहे गर्न कसलाई पो मन हुँदैन र!’ मसँगैको र बिहे हुन बाँकी साना पनि थुप्रै छन्। ६ वर्षअघि आमाको मृत्यु भएपछि उनी भावविह्वल भएर घरबाट निस्किइन्। खेतीपाती र घरधन्दाबाहेक केही नजानेकी उनी पेवामा होटल व्यवसाय गरेर बसेकी छिन्।
न्याकका स्थानीयले अहिले पनि छोरालाई सहर र छोरीलाई गाउँमै राख्ने गर्छन्। कतिपयले छोरीलाई पढाउँदैनन्। पढ्न, रोजगारीको सिलसिलामा सहर झरेका युवाले गाउँका केटी बिहे नगर्दा थुप्रै युवतीको बिहे भएको छैन। अहिले गाउँमा युवतीको र बिहे नभएका महिलाको संख्या धेरै छ। अन्यत्रबाट त्यहाँका युवती बिहेवारी गर्न युवक पुग्दैनन्। – पूर्वेलीन्यूज ।
यो हो पैसा फल्ने रुख
424 Views वास्तवमा पैसा कमाउन सजिलो छैन । भनिन्छ पैसा रुखमा फल्दैन । तर यो दुनियामा यस्तो रुख पनि छ, जसमा पैसा फल्दछ । जहाँ एउटा देशको मात्र कहाँ हो र अन्य देशको पनि पैसा फल्दछ । तपाइँले यसरी रुखमा पैसा फलेको तलका तस्वीरमा प्रष्ट देख्न सक्नुहुन्छ ।
यसरी पैसा फल्ने रुखको विरुवा त आफ्नो घरमै ल्याएर रोप्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना जाग्यो होला हैन ? तर के गर्नु, यो रुख अप्राप्य छ र यो जस्तो अर्को कुनै रुख यो दुनियामा छैन । यो रुख आफ्नो प्रजातिको अन्तिम रुख हो पृथ्वीमा ।
बेलायतको स्कटिस हाइल्याण्डस्थित पिक डिस्टि्रक्ट जंगलमा यो अनौठो रुख छ । पैसाले लादिएको यो रुख १७ सय वर्ष पूरानो हो । यो रुखको काण्डमा कुनैपनि त्यस्तो ठाउँ छैन जहाँ बेलायती मुद्राका सिक्का नटाँसिएका होउन् । देख्दैमा अद्भुत छ यो रुख ।
वास्तवमा यो रुखमा पैसा फलेका भने होइनन् । मानिसहरुले टाँसेका हुन् यसमा पैसा । रुखमा पैसा टाँस्नका लागि टाढा टाढाबाट मानिसहरु आउँछन् । धेरै विदेशी पर्यटक पनि आउँछन् यहाँ ।
त्यसैले रुखमा बेलायती तथा अन्य विदेशी सिक्का पनि टाँसिएका छन् । यहाँ कुनैपनि जोडी गएर रुखमा सिक्का टाँस्नाले मानव जोडीको सम्बन्ध अटूट हुने मान्यता छ ।
बिएमडब्लु कारभन्दा महँगो घोडा, १ करोड ८० लाखमा बिक्यो घोडा
928 Views एउटा घोडाको मूल्य कति होला ? भारतमा एउटा घोडा पौने २ करोड रुपैयाँ भन्दा बढिमा बिक्री भएको छ ।
राजस्थानको पाली जिल्लामा मारवाडी नश्लको प्रभात नामको उक्त घोडा नारायणसिंह आकडावासले १ करोड ११ लाख भारुमा किनेका हुन् । ११ वर्षको उक्त घोडा भंवर सिंह राठौरले पाल्दै आएका थिए ।
घरजग्गा तथा खानी व्यवसाय गर्ने धनाढ्य नारायण सिंहले यसअघि मारवाडी नश्लकै दुइवटा पोथी घोडा पालेका थिए । जब उनले प्रभात घोडाको बारेमा सुने त्यसलाई जतिसुकै मूल्य चुकाएर भएपनि किन्ने निधो गरे ।
पाैने दुइ करोड मूल्यको उक्त घोडाका लागि नारायणले दुईथरी तबेला तयार पारिसकेका छन् । एउटामा बस्ने र अर्कोमा चर्ने । बेलायती शैलीमा उसका लागि पानीको पोखरी बनाइएको छ ।
घोडाको रेखदेखका लागि ३ कर्मचारी नियुक्त गरिएको छ । बिहानको नाश्तामा घोडालाई अंकुरित चना तथा जौँ को पिँडो दिइन्छ र त्यसपछि मर्निंग वाक गराइन्छ । त्यसपछि गहुँको चोकर, मकै, सोयाबिन जस्ता खानेकुरा दिइन्छ । दिउसो हरियो घाँस खान दिइन्छ र मालिस गरिन्छ । बेलुकीमा घिउ, सख्खर, हरियो घास, दाना तथा हलेदो मिसाएको दुइ किलो दुध खान दिइन्छ ।
घोडालाई दिनहुँ स्याम्पुले उसको गर्धन लगायतका ठाउँका रौँ नुहाइन्छ । यो घोडालाई फार्म हाउसमा राखिएको छ, ता की यसले अन्य घोडीहरुलाई गर्भिणी गराओस् र प्रजननमा पनि काम आओस् ।
फ्रान्सकी हेरी नामकी महिलाले यो घोडालाई एक वर्षदेखि तालीम दिइरहेकी छिन् । आफुले यस्तो सुन्दर र चम्किलो घोडा दुनियामा कतै नदेखेको हेरी बताउँछिन् ।
यो घोडाले भारतका विभिन्न ठाउँमा भएका घोडा प्रतियोगिताको उपाधि पनि जितिसकेको छ । सायद यो घोडा दुनियामा सबैभन्दा महंगो घोडा हुनसक्छ । एजेन्सी
दुनियाकै सेक्सी महिला पुलिस, जसको हातबाट आफूलाई पक्राउन चाहन्छन् अपराधी
339 Views दुनियामा को मुर्ख होला, जसले आफुलाई कुनै पुलिसले पक्रियोस् भन्ने चाहन्छ । तर जर्मनीमा भने मानिसहरु भने एक जना पुलिस अधिकारीको हातबाट आफुलाई पक्राउन चाहन्छन् ।
भलै नपक्रिउन्, कम्तीमा ती पुलिसले आफुलाई नजर त लगाइदिउन् भन्ने ठान्छन् ।
हो, जर्मनीकी वरिष्ठ प्रहरी आयुक्त एडि्रएन कोलेसजर यस्ती महिला प्रहरी हुन् जसको हातबाट आफुलाई पक्राउनका लागि अपराधीहरुबीचमा पनि हानथाप हुन्छ ।
कोलेसजरको सुन्दरतामा पुरुष अपराधीहरु समेत यति धेरै नतमस्तक छन् की उनको हातबाट पक्रिइने सपना देख्छन् ।
कतिपय सर्वसाधारण तथा जिन्दगीमा कहिल्यै अपराध नगर्नेहरुले पनि सानोतिनो गल्ती गरेर उनको हातबाट पक्रिने निहुँ खोज्दछन् । उनी ड्युटीमा खटिएको ठाउँमा कतिले नियम विपरित तिव्र गतिमा गाडी चलाउने, कतै गाडी ठोक्काइदिने जस्ता काम गर्दछन् ता की सो अभियोगमा ती महिला पुलिसले उनीहरुलाई पक्रियुन् ।
पदले वरिष्ठ अधिकृत भएपनि कोलेसजरको उमेर जम्मा ३१ व्र्षको छ । उनका सुन्दर तस्वीरहरु इन्स्टाग्राममा निकै चर्चित छन् । उनले दैनिकजसो आफ्नो तन्दुरुस्त तथा फिट जिउडालका फोटा इन्स्टाग्राममा अपलोड गर्छिन् । सोसल मिडियामा उनका एक लाखभन्दा धेरै फलोअर्स छन् ।
यी ३१ व्र्षे सुन्दरी पुलिसका २८ वर्षे ब्वायफ्रेण्ड पनि छन् र उनले ब्वायफ्रेण्डलार्इ भरपूर समय दिन्छिन् । जिमखानामा नियमित रुपमा धाउने उनले आफ्नो ढाड र हिपको स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल गर्छिन् ।
८ सय रुपैयाँ दिनुस् एक दिन जेलभित्रको मज्जा लिनुस
366 Views के तपाइँलाई अपराध नगरीकनै जेलमा बस्ने इच्छा छ ? सायद जेलमा बस्ने इच्छा कसलाई पो होला र ? अझ पैसा तिरी तिरीकन जेलमा बस्न को जाला ?
तर जिन्दगीमा जेलबासको अनुभव हासिल गर्न नपाएका हरुका लागि जेलको बास केवल कल्पनाको विषय हो र कसै कसैलाई जेलभित्र एक दिन भएपनि बसेर अनुभव गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्नसक्छ । यस्तो इच्छा भएका हरुका लागि अब भारतमा इच्छापूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।
भारतको तेलंगानास्थित मेडक जिल्लामा रहेको एक पूरानो जिल्ला जेलले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
जस अनुसार जेलका कोठाहरु इच्छुक मानिसहरुलाई २४ घण्टाका लागि भाडामा दिइनेछ । यसका लागि प्रति कोठा ५ सय भारु तिर्नुपर्नेछ ।
५ सय भारु तिरिसकेर जेलबासको लागि नाम दर्ता गराइसकेपछि पूरै एक दिन पूर्ण कैदीको रुपमा जेलभित्र बस्न पाइनेछ ।